Ukuba uhamba ngokukhawuleza, ngokobuhlungu obunamanzi obunxibileyo akulula ukujamelana nayo. Ukukhawuleza ngokukhawuleza ukunqumla iinwele, ungathatha amanyathelo ngaphambi kokuba uhambe uhambo okanye umsebenzi.
Ungayinceda njani inwele ezinde?
Uhlambe ngobumnene zakho iinwele. Ukuba iinwele zide, faka i-shampoo kwi-scalp uze uyihlase, njengokuba kuncinci ukuthintela imida. Emva kokuba sihlambe i-shampoo, unako ukukhawuleza ukunqumla izinwele. Sisebenzisa i-shampoo yokunyusa.
Siza kubeka iinwele kwi-conditioner esemgangathweni, kuya kuthintela ukukhwabanisa kweenwele kunye nokugqithisa ubuso beenwele. Ukuba iinwele zixakeke kakhulu, cinga ukuba unokusebenzisa i-conditionerable conditioner. Emva kokuba iinwele zomile, siza kubahlula kwiindawo kwaye zinyanzele ngokucwangcisa ngokusebenzisa isinki ngamazinyo amancinane.
Ukuba ngexesha lokudibanisa i-hairbrush ifikelele emacaleni amathanga, siya kufaka i-conditioner encinane kwincinci yeenwele, ukunciphisa iinwele. Okanye sebenzisa amaconsi ambalwa e-rosemary ioli.
Ukuba uyomisa iinwele zakho ngomisi osikiweyo, qinise ngokucokisekileyo kunye nekhefu kunye namazinyo amancinci kwaye ubeke ngokwahlukileyo izandla zakho zibe yimida. Ukuba kunokwenzeka, yinyani ngokwemvelo iinwele zakho. Oku kuya kuncinci kwaye kuya kuba luncedo ngakumbi kwizinwele.
Ukudibanisa iinwele zenziwe ngokucophelela kwaye ngokuchanekileyo zisebenzisa i-combs yemvelo kunye nemigangatho. Ubunwele bezinwele ekuseni kwaye ngexesha lokulala, ukuba kuyimfuneko, hlanza ngosuku. Ngaphambi kokuthenga ikhefu lekhwalithi, masiqwalasele izinto eziphathekayo kunye nekhwalithi yayo.
Ii-Combs zihluke kakhulu, zihluke kumbala, ububanzi, ubungakanani, umgangatho kunye njalo njalo. I-Metal combs yeenwele xa idibanise kakhulu inonakalisa iinwele, kufuneka ilahlwe. Iimpawu ezincedo ziyakwakheka i-scallops kunye ne-combs, ezenziwa ngamatye. Ezi zidibanisi aziyonakaliswa kwaye zidibanise ngokupheleleyo iinwele.
Ama-Combs ezenziwe ngezinto eziphathekayo azenzi i-static electric, ngoko ke, iinwele aziyi kutyalwa. Iiplastiki ze-plastiki okanye i-ebonite zibiza, kodwa umgangatho uphantsi. Bayakwazi ukunweba iinwele zabo, eziza kukhulisa utyumba lweenwele kwaye ziza kubakho izicwangciso zesebe. Amacube ePlastiki anamazinyo abukhali kwaye anamaqabunga, xa udibana nabo unonakalisa ama-bulb ezinwele.
Ayikho indlela efanelekileyo yokudibanisa iinwele, ngokukodwa xa iibhulashi zineengubo ze-polyethylene. Xa usebenzisa i-brushes enjalo, i-scalp iyacaphuka kwaye iinwele zonakaliswe.
Akukhuthazwa ukuba udibanise iinwele ezimanzi okanye ngexesha lokuhlamba. Ukudibanisa okunjalo kwandisa ukulahleka kweenwele. Kukulungele ukusebenzisa i-brush ephezulu yeenwele ezinde, ngokukhawuleza idibanisa iinwele ezinde kwaye ayiyonakalise.
Xa iinwele zixubha
Izinwele zididekile, oku kuqhelekileyo kwaye akudingeki ukuba wenze intlekele ngenxa yale nto. Ukudibanisa iinwele ezibophekileyo, kufuneka uhlukanise izinwele zibe yimida, usebenzisa i-brush uze uqale ukudibanisa iinwele eziphelweni. Oku kuya kunceda ukunqumla izinwele eziboyiweyo.
Xa udibanisa i-brush, iinwele zihlala, kubonwa njengesiqhelo. Nsuku zonke, malunga neenwele ezingama-90 ziwa ngaphandle, akukho nto inokukhathazeka ngayo, ukulahleka kweenwele ngobuninzi obunjalo kubonwa njengesiqhelo. Izinwele eziye zishiya ziphelile, ezitsha ziza kukhula kwindawo yazo, ukuba ezinye iinwele ziwayo, kufuneka ujike kwiingcali ukuba unamawele angama-160 ngosuku, oku akuqhelekanga.
Ukunyamekelwa kweenwele kufuneka kwenziwe kwansuku zonke, kodwa kufuneka kwakhona unakekele ikhefu. Ukwenza kube luncedo, kufuneka ihlambuluke kwaye ifakwe. Njengoko ikhefu iyancipha, lungiselela isisombululo esinamandla sosipho, amanzi akufanele atshise kwaye uhlamba ikhefu kulo manzi. Ukuhlambulula amazinyo enqabileyo, siya kusebenzisa i-toothbrush, ukuze uhlambulule ngokupheleleyo. Yomisa kakuhle.
Siyabulela ezi ngcebiso, unokudibanisa ngokufanelekileyo intloko eboyiweyo.
Indlela yokukhetha iinwele zentsimbi
Indlela yokwenza izigulane zabantu abaziintloko bezinwele
Imihla yeenwele nge-brandy
"Umthendeleko wokuthobela": I-Absolue Keratine umgca ukusuka eRene Furterer ngenxa yeenwele ezingenanto
Indlela yokufumana ulwimi oluqhelekileyo nabasebenzi?
Indlela yokubuyisela ukuthembela kwintsapho emva kokugwenxa
Isobho se-Beetroot kunye ne-fennel ne-apple
Iintyatyambo ngaphakathi kwendlu
Iimpawu eziwusizo zemifuno
Indlela yokunciphisa umxholo wekhalori?